Ukhenketho lwefektri - iZhejiang Huaxiajie Macromolecule Building Material Co., Ltd.
Umzi-mveliso wethu ubekwe e-Zhejiang China, indawo entle kunye nendawo efanelekileyo kwisikhululo seenqwelomoya.
IHuaxiajie ngumvelisi okhethekileyo wodonga lwe-PVC kunye neepaneli zesilingi, ukubunjwa kwe-PVC amagwebu, iiprofayili ze-PVC / WPC kunye ne-PVC / WPC yangaphandle. Iimveliso zethu zinobuhlobo kwindalo.
Sinikwe ithuba kunye nendawo epheleleyo, singakubonisa zonke izibonelelo zethu kwaye masikhule kunye. Ndiqinisekile ukuba singasungula ubudlelwane bexesha elide kunye nobuhlobo kunye neshishini lakho elibekekileyo ngenxa yokuthembela kwakho kunye nenkonzo yethu ebalaseleyo.
Sisoloko sifuna ukusebenzisana ngokunyanisekileyo nangokubambisana nabathengi kwihlabathi liphela. Singabanikezeli bakho abangcono kakhulu kuluhlu olubanzi lweemveliso zeemveliso.
Ngokukhula kweemarike sokubumbela, R & D isebe inkampani yethu ongumnini iinjineli abaziingcali ukugxila ekuphuhliseni iimveliso.Isebe le-R & D alamkeli kuphela iiprojekthi ze-OEM, kodwa linokuthatha iiprojekthi ze-ODM.Ngomyili ogqwesileyo, siya kwenza iimveliso zepaneli yodonga ezigqibeleleyo ukuhlangabezana neemfuno zabathengi kunye nentengiso kwixa elizayo.